प्रगतिशील युवा संघ, नेपाल – Youth, Politics & Nepal
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी–लेनिनवादी)
प्रगतिशील युवा संघ, नेपाल, केन्द्रिय कार्यालय, रुद्रनगर मार्ग–३५९, रातोपुल, काठमाडौं
प्रगतिशील युवा संघ, नेपाल सम्पूर्ण प्रगतिशील, जनवादी तथा देशभक्त युवाहरुको साझा तथा गौरवशाली संगठन हो । यसले समग्र युवाहरुको हक–हित र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण खाले अन्याय, अत्याचार र दमनलाई निर्मूल गर्दै न्याय, समानता र स्वशासनको वकालत गर्दछ । यो संगठन सर्वप्रथम २०४७ साल जेठ १ गते केपी ओली अध्यक्ष रहेको प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघ, नेपालको नाममा स्थापना भएको हो । त्यस पछि २०५० साल फागुन १२–१५ गते विराटनगरमा भएको दोस्रो सम्मेलनबाट केशव स्थापितको अध्यक्षतामा ३५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बन्यो । २०५७ साल फागुन २२ गते पार्टी विभाजन पश्चात भएको युवाहरुको सम्मेलनबाट उदयराज पाण्डेको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति बन्यो ।
२०५९ वैशाख ३ गते रामहरि कार्कीको अध्यक्षतामा पुनः संगठनलाई पुनर्गठन गरियो । २०५९ पुष २७ र २८ गतेको राष्ट्रिय कार्यकर्ताको भेलाले यो संगठनको नाम प्रगतिशील युवा संघ, नेपाल राख्ने निर्णय गर्यो । २०६३ साल चैत्र १ गते भएको सम्मेलनबाट क.अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ्गको अध्यक्षता नयाँ कार्यसमिति बन्यो । २०६५ असोज ३–४ गते भएको संघको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनले पुनः अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ्गलाई अध्यक्षमा चयन गर्यो । २०६८ वैशाख १० र ११ गते भएको संघको पाँचौं राष्ट्रिय सम्मेलनले क. जयप्रकाश (जे.पी.) केरुङ्गको अध्यक्षतामा ३५ सदस्यीय कार्यसमिति बन्यो । २०७० वैशाख २८ र २९ गते भएको संघको छैटौं राष्ट्रिय सम्मेलनले क.लोकेन्द्र शाही अध्यक्ष रहेको ३३ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । यसलाई अंग्रेजीमा Progressive Youth Federations, Nepal भनिन्छ ।
यस संगठनका केहि प्रमुख उद्देश्यहरु ः
१ नेपाली युवाहरुको हक, हित, अधिकारको प्राप्ति र सुरक्षाको लागि कृयाशील रहने ।
२ नेपाली युवाहरुको मानसिक, शारीरिक र भौतिक विकासका लागि कार्यरत रहने ।
३ युवा समुदायलाई सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय, रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न प्रेरित गर्दै उनीहरुलाई अन्धविश्वास र सबै प्रकारका भेदभाव तथा कुरितिहरु विरुद्ध कृयाशील बनाउने ।
४ युवा समुदायलाई पतनशील, भ्रष्ट साहित्य, कला र संस्कृति विरुद्ध सचेत तुल्याउदै प्रगतिशील राष्ट्रिय जनवादी चरित्रको साहित्य, कला र संस्कृतिको निर्माणको लागि कृयाशील रहने ।
५ युवा समुदायलाई विभिन्न प्रकारका कुलत, दुव्र्यसन, भोकमरी र अन्य प्राकृतिक घटना आदिबाट मुक्त हुने अभियानमा सरिक गराउने ।